जीएमओ आयातका पक्षमा गगन थापा – NewsAgro.com
जीएमओ आयातका पक्षमा गगन थापा
काठमाडौं, २ फागुन / मुलुकभर जेनेटिकल्ली मोडिफाइ अर्गानिज्म (जीएमओ) जातका बीउको आयात तथा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभासद् गगन थापाले यस्ता जातका बीउ निश्चित क्षेत्रका लागि आयात गर्न मिल्ने बताएका छन्।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोमेन्ट (साउती) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा बीउबिजनको सुरक्षा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका थापाले भने, ‘जीएमओ जातका बीउ निश्चित क्षेत्रका लागि आयात गर्न सकिन्छ तर यसका लागि व्यापक रूपमा छलफल गर्न आवश्यक छ’, उनले भने।
किसान, कृषिविज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग गहन छलफल गरेर जीएमओ जातका बीउ आयात गर्न सकिने उनको कथन थियो।
साउतीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा डा. पोषराज पाण्डे, सभासद गगन थापा, केशब बडाललगायतका सहभागी
अमेरिकी संस्था मोनसान्टोद्वारा उत्पादित जीएमओ जातका बीउ आयात तथा बिक्रीवितरण गर्न नहुने भनेर पछिल्लो समयमा निकै विरोध भएको थियो। यसै सन्दर्भमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जीएमओ बीउ आयात तथा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन गत माघ १२ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। रिटमा जीएमओ जातका बीउ रोपिएका खेतबाट परागसेचन भएर अन्य स्थानीय जातका बिरुवामा समेत जीएमओको गुण देखिने दाबी गरिएको थियो।
सभासद् थापाले भने वर्णसंकर (हाइब्रिड) जातका बीउको सहज रूपमा आयात र बिक्री गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले संविधानले व्यवस्था गरेको खाद्य सम्प्रभुता र विश्व व्यापार संगठनको नीतिलाई हेरेर बीउबिजनसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने जानकारी दिए।
‘खाद्य सुरक्षा र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत जातका बीउको आवश्यकता छ, यसका लागि किसानको हितमा हुने गरी स्वदेशमा उत्पादन गर्नुका साथै विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ’, थापाले भने, ‘उन्नत बीउको विकासमा हाम्रो क्षमता, आपूर्ति र मागको स्थिति साथै नियमन निकायको क्षमताको आधारमा वस्तुनिष्ठ नियम बन्नुपर्छ।’
कृषि क्षेत्रको विकासबिना मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो नहुने जानकारी गराउँदै एमालेका सभासद् केशव बडालले उन्नत बीउबिजनलाई कृषि विकासका लागि पुलको रूपमा हेर्न आग्रह गरे। ‘कृषि क्षेत्रको विकासका विभिन्न पक्षमध्ये बीउबिजन एउटा कडी हो। यसको विकास देशको भूगोल र उत्पादनको आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्छ’, उनले भने।
नेपालका कृषि अनुसन्धानसम्बन्धी निकायले स्वदेशमा आवश्यक उन्नत बीउ उत्पादन गर्न नसकेकाले धेरै बीउबिजन आयात गर्नुपरेको उनले आरोप लगाए। ‘अनुसन्धान गर्ने संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा पनि राजनीति पसेको छ। त्यहाँ अनुसन्धान कम, खिचातानी बढी हुन्छ’, उनले भने। कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न सकेमात्र उत्पादकत्व बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
एकीकृत माओवादीको पूर्वसभासद् पेशल खतिवडाले जमिन र प्राकृतिक संसाधनमाथि किसानको अधिकार हुनुपर्ने बताउँदै यस्तो अधिकार दिएपछि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने दाबी गरे। ‘सर्वपक्षीय छलफलको आधारमा बीउ आयात, रैथाने बीउको संरक्षण र जीएमओ बीउबारे आवश्यक नीति तयार गर्नुपर्छ’, उनले भने।
सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले विश्वभर जीएमओ जातका बीउको बारेमा समर्थन र विरोधका कार्यक्रम हुँदै आएको जानकारी गराउँदै विश्वका २९ मुलुकमा जीएमओ बीउ प्रयोग भइरहेको बताए।
‘भारत र पाकिस्तानमा कपास उत्पादन बढाउन जीएमओ प्रयोग भएको छ। चीनले खाद्यवस्तुमा पनि जीएमओ बीउ प्रयोग गरेको छ’, उनले भने। पाण्डेले नेपालमा हाइब्रिड बीउको प्रयोग प्रशस्त मात्रामा भइरहे पनि जीएमओको अवस्थाका बारेमा जानकारी नभएको बताए। ‘बीउबिजनको नियमनका लागि कानुनी र नीतिगत आधार तयार छ तर यसको सैद्धान्तिक धरातल निर्माण गर्नुपर्छ’, उनले भने।
← अदुवाको परिकारका बजार राम्रो
उखु रोप्ने उपकरणको सफल परीक्षण →
दैवी प्रकोपका लागि कृषिमा जम्मा तीन करोड बजेट
प्रदेश १ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता